I-Web Scraping Tools ezokukusindisa ixesha kwi-Extraction Data-Tips Tips
Iifowuni ezondla kwisicelo sakho, okanye nje ufuna ukukhupha idatha yocwaningo, ezinye izixhobo
ezidumileyo ezidumileyo zingasindisa ixesha elininzi kwaye zingasigcina. Yingakho siye saxoxa ngezixhobo ezine ezinamandla kunye nesebenzayo zokucoca i-web ezokulondoloza ixesha lakho namandla.
Uipath uchwephezele ekuphuhliseni isofthiwe esisebenzayo esicwangcisiweyo njenge-screen scraping kunye ne-web scraping tools kwiwebhu kunye nedeskithophu. Uipath web scraper sele isisombululo esilungileyo kunye esipheleleyo sabangabinkqubo kunye nabangewona amakhowudi. Iyakwazi ukugqithisa ngokulula imingeni ye-intanethi ye-extraction data, efana nokuhamba kwiphepha, ukumba kwefowuni kunye nefayile yefayile. Udinga ukuvula idilesi yayo yokwahlula idatha kwaye uqwalasele ulwazi ofuna ukukhipha. Vumela le sixhobo isebenze umsebenzi wayo ngexesha elimiselweyo, kwaye umphumo uya kuba mkhulu. Ngokukhawuleza uza kufumana amaxwebhu afanelekileyo e-CSV kunye ne-Excel. Ngolu hlelo, uya kuba nako ukuzenzekelayo ukugcwalisa ifom nokuhamba. Makhe ndixelele apha ukuba inqaku layo lamahhala liza neenkcukacha ezingenamkhawulo, kodwa inguqulelo yeprayimenti iyabiza kwaye ayiyi kuhambelana nabanikazi beeblogi bembali okanye i-webmasters.
Ngenisa..Io isinikeza isicelo sedeskithophu samahhala kwaye sinceda ukukhangela idatha kwiqela elikhulu lewebhu. Le nkonzo iyakhathalela onke amaphepha ewebhu njengemithombo yolwazi engenako kwaye ivelise ii-API kubasebenzisi bayo. Ukuba ngaba iphepha elifake ngalo lucacisiwe ngaphambili, uya kufumana i-API yalo kwangoko. Ngaphandle koko, i-Import.io inokusikhokela kwinkqubo yokudala i-matrix yokuhlutha ngoncedo lwababambene kunye neeskrini ngaphakathi kweeyure ezingama-20. Le nkonzo iyamangalisa kwaye kulula ukuyisebenzisa, kwaye awudingi naziphi na izakhono zobugcisa. Nangona kunjalo, i-Import.io ayikwazi ukuhamba ukusuka kwelinye ikhasi lewebhu ukuya kwelinye ngokuklikha. Ngamanye amaxesha, kuya kuthatha iintsuku ezimbini ukuhambisa iingxelo zakho.
UKimono uyadumila kwaye enye yezona zixhobo zokutsala i-web ukugcina ixesha lakho kwisiqulatho sedatha. Le nkqubo idume phakathi kwabaphuhlisi kunye nabaprogram abafuna ukuxhobisa iimveliso zabo ngaphandle kweekhowudi. Iyakusindisa ixesha lakho njengoko unako ukubonelela ngezibonelo ezilungileyo nezimbi zokuqeqesha esi sixhobo. Ngaphezu koko, i-API idalwe kumaphepha ewebhu yomnqweno wakho kwaye idatha ingabhalwa nayiphi na ifomu. UKimono usebenza ngokukhawuleza kwaye ulungele ukufumana idatha malunga neemakethi ze-stock and newsfeeds. Ngelishwa, akukho phesheya lwephepha elikhoyo, kwaye siya kufuneka sichithe ixesha lokuqeqesha esi sixhobo phambi kokuba sikhuphe idatha echanekileyo kuwe.
4. I-Screen Scraper: